Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: tranga miantso vonjy | NewsMada
Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: tranga miantso vonjy
Nitanisa ny tarehimarika manambara ny habetsahan’ny olona namoy ny ainy vokatry ny loza teo amin’ny fifamoivoizana sy ny traboina nandao ny tany noho ny fanaparana herisetra tafahoatra na noho ny disadisa miseho eo amin’ny fiarahamonina na noho ity tsy fisian’ny fandriampahalemana efa tsy resahana intsony ity nefa anisan’ny fanetribe voalohany tsy maintsy fongorina eto amin’ny tany sy fanjakana. Na isam-bolana na isan-taona no anaovana ny totalin’ireny trangam-pahafatesana tsy nampoizina ireny dia mampihoron-koditra hatrany na vokatry ny fanamperan’aina ataon’olombelona izany na voina ateraky ny loza eo amin’ny fifamoivoizana, samy tranga fampihorohoroana ny mponina avokoa.
Tato ho ato moa dia nisesisesy ny trangan-doza mahatsiravina nahafatesana olona maro teo amin’ny fifamoivoizana. Tsy ho resahina intsony ny mikasika an’ireo miseho amin’ny mpitaingina moto sy scooter maro izay samy misisisisika arak’izay afany noho ny fahamaizana ao anatin’ny fikatson’
ny fifamoivoizana. Fa ny tena mampihorohoro dia ny nahafatesan’olona maro, niara nitaingina fiara mpitatitra ikambanana. Dia tsy maintsy ho feno ahiahy rehefa miakatra ao anatin’ny sasany amin’izy ireny ka hanana fahasahina amin’ny fanaovana lakalaka ny fandehanana amin’izy ireny toy ny sanatria miditra ao anatin’ny vata-paty faobe, dia aleo hitranga izay hitranga.
Miankina amin’ny fandravonana ny fomba fitantanana daholo izany, ary na manana ny andraikiny aza ny mpitandro filaminana eo amin’ny fanatanterahana, ny tompon’andraikitra voalohany dia ireo mana-pahefana ambony mandamina ny rafitra apetraka ho fiarovana ny filaminana. Misy moa no milaza fa tokony ampiana ny isan’ny zandary sy pôlisy. Marina angamba izany, nefa mipetraka ho azy ny fanontaniana. Ny kely ananana aza toa tsy hay alamina. Raha mandeha amin’ny lalam-pirenena, gaga ihany mahita fisavana indroa na intelo tsy mifanalavitra mihoatra ny roa na telo na dimy na folo kilaometatra. Dia avy teo tsy mahatazana tompon’andraikitra intsony mandritra ny zato na roanjato kilometatra…
Mbola talanjona kokoa raha maheno fa misy olon-tsotra manana zandary na pôlisy miantoka manokana ny fiarovana azy ireny. Heno izany tamin’ny filazana fa tsy nahomby firy ny zandary na polisy mpiaro manokana tamin’ny fangalana an-keriny an’i Rakotofotsy itsy na i Fatsora iroa. Mbola niseho koa ny fisiana miaramila na zandary na polisy mpiaro manokana olon-tsotra iray. Ahoana marina ny momba ny fiarovana olona manokana anefa tandrevaka ny fitandrovana ny fandriampahalemana eo anivon’ny fiaraha-monina iainan’ny vahoaka ? Hany tazana dia mitongilana ny mizana fandanjana an’ity voalaza ho fitoviana zo ity.